Moscow teknika University ny Serasera sy ny Informatika
University of Moscow teknika Fifandraisana sy Informatika Details
fanafohezan-teny : MTUCI
Aza adino ny iaraho midinika ny University of Moscow teknika Fifandraisana sy Informatika
Misoratra anarana ao amin'ny University of Moscow Technical Fifandraisana sy Informatika
Tamin'ny faha-11 ny Febroary, 2011 ny Moscow Teknika University ny Serasera sy ny Informatika (MTUCI) Nankalaza ny faha-90 taona.
Anisan'ny am-polony ny an'arivony ny diplaoma misy tsara- mpahay siansa sy ny manam-pahaizana manokana fantatra, miavaka fanjakana sy ny olo-malaza ao Rosia sy firenena maro any Azia, Africa, Eoropa sy Amerika Latina.
Ankehitriny ny MTUCI no lehibe indrindra foibe fampianarana sy ara-tsiansa ho an'ny fanomanana sy ny retraining ny tena kinga manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra, Informatika, onjam-peo injeniera, toekarena sy ny fitantanana.
Ny firafitry ny University roa manarona sampana isam-paritra tany amin'ny tanànan'i Rostov-on-ny sy Nizhniy Novgorod Don, Scientific Research Center, Fifandraisan-davitra Training Advanced Center, College ny Fifandraisan-davitra, Pre- fanabeazana fiomanana Center, Scientific- Fanabeazana Range ny New Techniques, Scientific Technical Library. Valo Foibe Fanofanana amin'ny fanomanana ny Rosiana noforonin'ny manam-pahaizana manokana ara-teknika ny MTUCI miaraka amin'izao tontolo izao no mitarika ny fifandraisan-davitra orinasa miasa. Ao amin'ny MTUCI fototra iray tena miasa Technopark niforona ny am-polony ny mpandray anjara avy amin'ny orinasa isan-karazany sy ny fikambanana eo amin'ny fifandraisan-davitra sy ny tontolon'ny teknolojia vaovao noforonina.
Ny University mitarika Fanabeazana- methodological Association amin'ny fanabeazana eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra, izay ahitana mihoatra noho 80 toeram-pampianarana ambony any Rosia sy firenena CIS.
Ny fampianarana MTUCI mpiasa dia mikasika ny 700 olona. Anisan'izany misy ny 100 ary mihoatra noho ny mpampianatra 400 kandidà ny siansa sy ny zokiolona mpampianatra. Anisan'ny mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i misy feno sy ny iraky ny mpikambana ao amin'ny Rosiana sy ny iraisam-pirenena akademia, mpandresy an'i Lenin sy ny Fanjakana loka, loka ny Governemanta ny Federasiona Rosiana.
Tokony ho efatra arivo amby mpianatra ny fotoana sy taratasy manontolo ny fanabeazana, Lahatsoratra-nahazo diplaoma ireo mpianatra sy ny mpanatrika ny taranja isan-karazany no mianatra ao amin'ny University. Education dia nentina avy araka ny rafi-pampianarana ankehitriny multilevel: ny mari-pahaizana licence, ny injeniera, ny tompony 25 voatokana sy 8 toro-lalana. Fomba fiasa sy ny fomba fampiofanana miorina amin'ny zava-bita ny farany eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra sy ny teknolojia vaovao no ampiasaina ao amin'ny MTUCI. Ny foto-kevitra ny “elektronika oniversite »mamela “mba electronize” dingana rehetra amin'ny fifantenana, fieken-keloka, fanofanana sy ny fizahan-toetra ny mpianatra dia tanteraka. Isan-taona mihoatra noho 1000 mpianatra sy ny lahatsoratra-nahazo diplaoma ireo mpianatra handray anjara amin'ny asa ara-tsiansa eo amin'ny sehatry ny zava-baovao infocommunication teknolojia eo am-pototry ny MTUCI ny Fikarohana Siantifika Center .
Ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena ao amin'ny Oniversite efa maharitra efa ho 70 taona. Ny mpianatra vahiny voalohany dia tonga nianatra tany amin'ny MTUCI in 1946. Nanomboka teo dia maro an'arivony tompo, bachelors, injeniera, mpiofana ary mihoatra noho 350 kandidà ny siansa avy amin'ny 82 firenena eo amin'izao tontolo izao no vonona. Miorina amin'ny fifanarahana mivantana ny fiaraha-miasa amin'ny 48 andrim-panjakana sy ny 16 orinasa avy 46 firenena vahiny dia tanterahina. Ny University dia mpikambana ao amin'ny sehatry ny fampandrosoana ao amin'ny International Telecommunication Union (itu) ary milalao ny anjara toerana manan-danja eo amin'ny asa ny itu sy ireo fikambanana iraisam-pirenena ny fifandraisan-davitra
Department of “Teknolojian'ny fampahalalana”
Department of “Radio sy ny Televiziona”
Faculty “Tambajotra sy ny fifandraisana rafitra”
Faculty ny Toekarena sy ny Management
Ny fotoana sy ny taratasy ara-teknika ankapobeny misaina
Faculty fiofanana sy ny retraining (mpampianatra sy ny matihanina)
Ny tantara ao amin'ny Oniversiten'i nanomboka tamin'ny 1921 raha ny Moscow Institute of Engineering elektrika sy ny National Fifandraisana (MIEENC) dia nanangana.
In 1938 ny MIEENC natambatra tamin'ny Engineering sy ny Teknolojia Academy eo amin'ny fifandraisana (ETAC). Ireo andrim-panjakana roa fanabeazana ambony namorona ny fototry ny Moscow Sekoly Momba ny Fifandraisana injeniera (totozy) izay nantsoin'Andriamanitra hoe tany 1946 ho eo an-Moscow Institute of Telecommunication injeniera (Mite).
In 1988 telo fikambanana – ny farantsakelin'ilay, ny rehetra-Union Institute for fifandraisana in elektrika Engineering sy ny rehetra-Union Institute for Administrative Staff Retraining namorona ny fototry ny Moscow Sekoly Momba ny Fifandraisana (Mik).
Araka ny didin'ny Federasiona Rosiana Governemanta in 1992 ny Mik dia ovana hahazo University of Moscow Teknika Fifandraisana sy Informatika (MTUCI).
Ianao ve mila iaraho midinika ny University of Moscow teknika Fifandraisana sy Informatika ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
University of Moscow teknika Fifandraisana sy Informatika amin'ny Map
University of Moscow teknika Fifandraisana sy Informatika hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny University of Moscow Technical Fifandraisana sy Informatika.
Rostov State University Medical Nadininy